Hypertonic autism, Epevezeték dyskinesia - tünetek és kezelés - Hasnyálmirigy-gyulladás April, Helminths faj táblázat
I-hypertension ye-Portal yimeko ebangelwa zizifo zesibindi. Luhlobo loxinzelelo lwegazi oluphezulu uxinzelelo lwegazikodwa kunokuba luchaphazele umzimba wonke, luyachaphazela kakhulu imithanjeni ye-portal ephuma emathunjini ukuya esibindi. Ingxaki enkulu ye-hepatitis yobunxila kunye ne-cirrhosis yesibindi, kwaye ingabangela ukuvuvukala nokukhupha. Igazi lihamba ngeBindi: Indlela esebenza ngayo Isibindi sithola igazi kwimithombo emibini.
Igazi elitsha, elivela entliziyweni, linika iimfuno zesibindi ngokwazo. Kwakhona, ngenxa yokuba isibindi sihlutha iibhoksi kunye neenkqubo zondlobo, igazi eliphuma emathunjini kunye nezinye izitho zenkqubo yokugaya zingena nge-veal vein.
Igazi kwi-portal vein lihamba ngqo kwisibindi kwaye ikwazi ukusebenzisana ne- hepatocytes hypertonic autism zesibindi. Igazi liyaqhubeka libindi kwaye libuyela entliziyweni nasemiphakeni ngokusebenzisa iitshini ezahlukeneyo zeenqanawa-iimvumba ze-hepatic. Kutheni Kubalulekile Ukuba Ubomi?
Ukuba indlela eya esibindini emathunjini ivaliwe okanye iyancipha ngenxa yokhuselo, ke uxinzelelo luya kwandisa inkqubo yokutya. Oku kuye kwacaciswa kum ngokucinga ngesosiko se-portal njengengadi yomyezo kunye nokukhazamiseka njengekink kwi-hose.
Uyazi ngamava ukuba uxinzelelo lukhula emanzini. Into efanayo inokuthi yenzeke emzimbeni wethu, ngaphandle kokuba, ngokungafani nombhobho wamanzi, iimvumba zethu zivuza xa uxinzelelo luyakha. Oku "kuphazamisa" yinto ebangela ukuba u-ascitic vernyomas normal kwaye umbane we ascites, okanye ukwakhiwa kwamanzi.
Yintoni Ebangelwa Ukuvalwa?
I-cirrhosis yesibindi ingabangela i- fibrosis ebanzi. I-Fibrosis yimbangela eqhelekileyo yokuxinzeleleka kwegazi, nakuba kukho ezinye izimbangela ezininzi njenge-schistosomias, i-sarcoidosis, kunye nesifo sofuba.
Ukuqhwala kakhulu kwe-fibrosis kukuphazamisa ukuhamba kwamanzi ngamanzi. Hypertonic autism ukufanisa kwethu ngasentla, i-fibrosis "i-kink kwi-hose.
Njengoko igazi kunye namanzi asemzimbeni azama ukucoca ngebhubhiso elivinjiweyo, uxinzelelo lwakhiwa kwi-portal system, ekhokelela kwiingxaki ezingaphezulu.
Ziziphi iingxaki ezibangelwa yi-Portal Hypertension?
Iingxaki ezibalulekileyo ezinxulumene nomfutho wexinzelelo lwengxowankulu yi-ascites ukuqokelela kwamanzi amaninzi kumathishini afaka izitho kunye nodonga lwesisu kunye nama-varice iimvumba ezigxile kwi-esophagus, esiswini okanye emathuneni obangelwa ukuphuma kwegazi. Ii-Varices zibangelwa ngqo yi-portal hypertension. Xa ukuphuma kwegazi kwisibindi kuphazamiseka, igazi lingagxininiswa kwiinkqubo ze-portal venous system inkqubo yeethambo ezithutha igazi phakathi kwenkqubo yokutya kunye nesibindi kunye nenkqubo ye-venic system inkqubo yeemvini ezibuyisela igazi entliziyweni.
Iindlela zokubambisana kwezi zimbini ziinkqubo ezincinci, iimitha zegazi ezibuthathaka ezibizwa ngokuba yi-capillaries. Ezi nqanawa azikwazi ukujamelana nokunyuswa kwengcinezelo yegazi kwaye zifakwe okanye zixutywe.
Further issues concerned how Alzheimer individuals handled their cognitive erosion in everyday life and if they were well calibrated with their spouse in disease related matters.
Iinqanawa ezinjalo ziyakubonwa ngaphantsi kwendawo yesisu okanye isisu ngexesha lenkqubo ebizwa ngokuba yi-endoscopy. Zibuthakathaka kwaye zisengozini yokuphuma kwamanzi. Ewe, kuba i-portal blood pressure ingabangela ukuphuma kwegazi.
Biliáris dyskinesia - tünetek és kezelés - Diagnosztika A balatoni vágódurbines Acerina cernua L.
Iindlululo zokuxhamla zixhaphake kakhulu kubantu abane-cirrhosis eziphambili kwaye kuqikelelwa ukuba omnye kwaba bantu abathathu abane-varices baya kuphucula igazi. I-Portal Hypertension Iyabonwa Njani? Nabani na ophethe i-cirrhosis eziphambili baya kujongwa ngokukhawuleza ekuphuhliseni i-portal hypertension, esoloko ixilongwa ngokuba khona kwesinye okanye ngaphezulu kwezi zinto zilandelayo: Thrombocytopenia.